मेरो बैसाखमा बिहे फिक्स भएको थियो अर्को केटा कोठामा आएर… (भिडियो सहित) – My Blog
मेरो बैसाखमा बिहे फिक्स भएको थियो अर्को केटा कोठामा आएर… (भिडियो सहित)
No Comments on मेरो बैसाखमा बिहे फिक्स भएको थियो अर्को केटा कोठामा आएर… (भिडियो सहित)
बाँकेकी संगीता सुनारको घ’टना निकै अनौठो छ । उनका श्रीमान सम्पर्कमा छैनन् । श्रीमानको नाम सुनिलकुमार सुनार हो । उनको विवाह भएको ६ वर्ष पुगीसकेको छ । तर उनको विवाह अनौठो तरिकाले भएको हो । संगीताको विवाह वैशाखमा अर्कै केटासंग हुने फिक्स भइसकेको थियो । सुनिलकुमार संगीताको घरमा आइरहन्थे । संगीताले सुनिललाई पुसाईँ भन्थिन्, ।
अब मेरो अर्कैसंग विवाह हुन लागेको छ मेरो पछि नलाग भनेर उनले सुनिललाई सम्झाइन् । मलाई मेरो जिवन खुसीसाथ विताउन दे भनेर भनेर मैले बारम्बार आग्रह गर्थेँ, संगीताले त्यो दिनको घ’टना सुनाउँदै भनिन्, त्यो दिन सुनिल मेरो कोठामा आयो । सुरुमै मेरो भिडियो खिच्यो । अनि मेरो सिउँदोमा सिन्दुर हालिदियो । मैले त्यती बेला पुसाई तपाईले किन यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ ? भनेर सोधें ।
मेरो प्रेमीले देख्यो भने मेरो जिवन व’र्वाद हुन्छ भनेर कराएँ । उसले मलाई कर णी गर्न खोज्यो मैले कराएर सबैलाई बोलाएँ । पहिला सिन्दुर हाल्यो, तेरो प्रेमीलाई देखाउँछु भन्दै लु’गा खो’ले’र रे प गर्यो उनले भनिन् । उनले प्रहरीमा उजुरी दिइन् । तर गाउँका मान्छे र सुनिलको परिवारले दुवै जना कन्य नै हो विवाह गर भनेर सल्लाह गरेपछि सबै मिलेर आफुहरुको विवाह गरिदिएको बताइन् ।
तर अहिले सन्तान भइसकेपछि सुनिल सम्पर्क विहिन भएको संगीताको भनाई छ । कला क्षेत्र निकै मन पर्ने संगीता कलाकार हुन चाहन्थिन् तर सुनिलले सबै योजना चकनाचुर बनाइदिएको बताइन् । मलाई सुनिललाई कहिल्यै माया नगरेको बताइन् । सुनिललाई सम्बन्ध विच्छेद नै चाहेको भएपनि आफुले दिने उनको भनाई छ ।
← ज्ञानेन्द्र शाहीले सार्वजनिक गरे गोप्य भिडियो, के थियो घटनाको बास्तबिकता ? (भिडियो सहित) → सुत्केरी श्रीमती छोडेर श्रीमानलेअर्कै लिएर फरार,बिबाह भएको १० बर्ष पछी जात मिलेन तेरा छोरि खोलामा लगि फाल्देल भनेपछि